Madaxweynaha oo ka hadlay heshiiska Somalia la gashay Mareykanka iyo Qatar | Kalshaale
Madaxweynaha oo ka hadlay heshiiska Somalia la gashay Mareykanka iyo Qatar
Dec 6, 2017 - 1 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in heshiisyada horumarineed ee Soomaaliya ay la saxiixatay dowladaha Maraykanka iyo Qatar ay yihiin kuwa ka tarjumaya horumarka ay dowladdu ka samaysay dhanka xiriirka iyo iskaashiga caalamiga ah.
Maasha’aAllaaH!!! Aad bay u mahadsanyihiin
Maraykan iyo Qatar inay tix geliyeen Dawlad Wanaaga iyo isku kalsoonaanta M.C
Farmaajo iyo Khayre.
Cadowgiin ha jabo!!! Waa Hubaal inu Maanta Jabay! Allaah (SWT) baa idinka Raali ah, Soomaaliweyn baa idinka Raali ah.
WAA HIIL SOOMAALIWEYN!!!